Talooyin Dhibaatooyinka u YouTube
Waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin marka la isticmaalayo YouTube, sida waxa aan la shaqeeya oo dhan, waa codka halkii gaabis ah ama aan lahayn ama xayeysiiska aad u badan. Mar dambe ma welwelin. Halkan waxa ku jira oo dhan talooyin aad rabto oo aad dhibaatooyinka aad ugu dhaqsaha badan xal looga gaari doono.
Qaybta 1. Sidee ay u xaliyaan dhibaatada ee YouTube aan shaqayn
Qaybta 2. Sida loo xaliyo dhibka of gaabis ah YouTube
Qaybta 3. Sidee u xaliyaan dhibaatada ah ee No Sound on YouTube
Qaybta 4. Sida loo tir-Ads on YouTube
Qaybta 5. Sida loo Cad Your YouTube Taariikhda
Qaybta 6. Sida loo Isticmaalo YouTube Doubler la Sameeyo Video Mashup
Qeybta 1: Sida ay u xaliyaan dhibaatada ee YouTube aan shaqayn
YouTube ayaa, ilaa markii la aasaasey, mid ka mid ah website-horseedka halkaas. Maanta, waxa uu haystaa balaayiin videos kala duwan oo daboolaya kaliya oo ku saabsan maado kasta oo aad ka fekeri karto. Si kastaba ha ahaatee, YouTube uu leeyahay ayna duleella iyo dadka isticmaala si joogto ah u heli karaan dhexgalka goobta si ay u noqdaan kuwo ku niyad-jab. Haddii aad ku dhibtoonayo inuu helo wax kasta in ay ku xidhmaan ilaa si fiican sidii aad u isticmaali goobta, akhri on hoose ee qaar ka mid ah dhibaatooyinka iyo Xalka ugu badan ee la YouTube marka aan shaqayn.
Waxaa jira xaalado dhowr ah YouTube aan shaqayn. Sida mudooyinka kala duwan, waxaa jira xalal kala duwan.
Xaaladda 1: Videos Taasi ma ciyaari doono
Xaaladda 2: Arrimaha Video Display
Xaaladda 3: YouTube maqan yahay koronto-tago
Mararka qaarkood, video ah oo kaliya sii joogi doono weligiis loading. Waxba abid u muuqataa, tanina waxay noqon karaan kuwo niyad-jab marka aad ugaadh video saxda ah oo kaliya in ay helaan xitaa ma bilaaban doono!
Haddii aad tahay si aad u daawato videos qaar ka mid ah, laakiin aan dadka kale ay awoodaan, markaas kuwaas oo talooyin guud oo u muuqdaan in ay ku filan si dhab xodxodtaan goobta galay si sax ah u shaqeeya adiga iyo shuban video kasta. Marka hore waa in ay isku dayaan in ay webpage ugu ceshadaan oo ka dibna aan arko fursadaha kale.
2. Hagaaji biraawsarkaaga in nooca ugu dambeeya - hubi daalacashada aad si rasmi ah goobta si aad u hesho a link download
3. tayada Change goobaha - Hoos goobaha aad ka dibna riix play, taas oo dib u baallo laga yaabaa in ficil. Dib Demi in goobaha aad ka jeeclaadeen mar ay bilowdo inay ku shuban.
4. Update Flash Player - Tani waa arrin caadi ah. Hubi Flash Player si aad u aragto haddii ay ilaa taariikhda, haddii aan videos in ay yihiin loading laga yaabaa in la jaan qaada version ugu dambeeyey
5. Clear Cache - baxay Nadiifinta aad khasnado waa mid fudud, oo waxaa badanaa laga sameeyaa iyada oo aad tab History on your browser. Mar wax danbi aad khasnado iyo cookies, guuleysatey browser iyo mar kale isku dayaan video ah
Mararka qaarkood, waxaad ku shuban doonaa video ah iyo midabka ama tayada waa hab ka baxsan. Ciyaaryahanka ayaa laga yaabaa in ay cado qalaad in la eego midabka, ama waxaa laga yaabaa in a line cagaaran badan oo dhex marayay bartamaha video ah. Waxaa jira kala carar badan garaafyada ee dhici kara, iyo taladan guud u muuqdaan inuu iyaga ka dhaqaajiyo.
1. Cusboonaysii wadayaasha naqshadeynta aad - Kaarkaaga muuqaallo kale u baahan kartaa updated iyo waxa la qaban karaa si caddaalad ah si fudud. Tag saaraha ee kaarka muuqaallo kale si aad u hesho darawallada ugu dambeeyey, inta badan ee kaararka naqshadeynta waxaa ka mid ATI ama nVidia. On Apple, haddii aad soo booqato logo Apple oo guji Software Update, waxaa si toos ah ka heli kartaa oo aad u.
2. xawaaraha hardware Disable - Taas waxa loo sameeyaa iyada oo loo marayo Flash - iyada soo gelin karaa video qaab ciyaareed aad u fiican. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad si fudud u xaq-riix video aad u arkaysid oo guji 'Settings ". Next, awood hardware sanduuqa xawaaraha waa in unselected. Xir sanduuqan ka dibna u raaxayn aad page, oo waa in aad isku aragto farqiga degdeg ah
Haddii aad tahay user Chrome ah, ka dibna waxaa laga yaabaa in aad dareentid in mararka qaarkood Google Chrome dhiman fur-tago in uu ordo video habboon. Si kastaba ha ahaatee, waxaad si fudud u heli karaan xal dhibaatadan iyo aad u hesho videos socda badan ka sii macaan yahay ka hor. Haddii helid fudud ee bogga kuma filna si uu u xaliyo dhibaatada, ka dibna trick tan hoos hoos ku fudud waxaa laga yaabaa in waxa aad u baahan tahay;
Si fudud u tagaan oo ay u Adobe Flash Player, kaas oo aad ka heli kartaa halkan . Download version ugu dambeeyay, ka dibna la bilaabi your computer. Isku day inaad video mar kale hadda - tani waxay noqonaysaa in aad ku buuxisid mid ka mid ah la waayay fur-tago, waayo, habka, kuu oggolaadaan in aad soo ordi aad YouTube videos aad waqti u gaar ah iyo xawaaraha.
Qeybta 2: Sida loo xaliyo dhibka of gaabis ah YouTube
YouTube waa mid ka mid ah website-yada inta badan la isticmaalo dunida, updated maalin walba kula kun oo fikrado cusub content iyo filimada. Laga soo bilaabo videos music aad jeceshahay in sir ah aragtiyaha shirqool, YouTube runtii waxay leeyihiin oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar laga yaabo inaad ogaato in YouTube waxa aad u tartiib ah. Videos waa beddeli kara, pages qaadataa waqti dheer si ay u shuban, iyo jeer naqdida ka bixi kasta oo labaad marayay. Haddii aad uu bilaabay in uu noqon kuwa buka ee u dhac naqdida in aad si joogta ah u soo gaarto on YouTube ah, Ma eedeynaayo servers ah weli.
Waxaa jira xalal badan oo ay u xaliyaan barnaamijkan. Qofka ugu horeeya ee waa inaad kala soo baxdo videos inuu soo jeedo offline. Kuwa kale waxa ay tahay in uu ku biiro YouTube baal oo si By-gudubto ISP Throttling. Fiiri macluumaadka hoos ku qoran.
Xalka 1: Download YouTube videos si uu u daawado offline
Solution 2: Ku biir YouTube baal
Xalka 3: By-gudubto Throttling ISP
Wondershare AllMyTube-Program aad u baahan tahay
1. Download videos ka YouTube iyo in ka badan 100 goobood oo video online la mid click
2. Beddelaan videos in badan oo ka mid ah qaababka sida AVI, MOV, MP4, MP3 iyo kuwa kale
3. jadwaliye Task iyo soo bixi YouTube videos ku yaalla
Hubi halkan u downloaders dheeraad ah.
Xalka 2: Ku biir YouTube baal
Qalab ka gaabsadeen-in Tani waxba ma uusan ka dhacay suuqyada waa weyn, laakiin waxa ay si rasmi ah YouTube ah shati qalab ayaa, xaaladaha qaarkood, hagaagtay xawaaraha jeer naqdida iyo loading on YouTube. By ay ka saareen khayraadka muuqaalada culus goobta YouTube iyo sidoo kale qaar ka mid ah iyadoo la isticmaalayo algorithm aad u horumarsan online, waxaa hoos u qadarka xogta in browser leeyahay in ay qaataan in halka loading video ah. Taas macnaheedu waa in khayraadka dheeraad ah ayaa la gelin dhinaca helitaanka orodka video ah, oo aan looga heysto oo dhan. alaabtayda oo dhinaca.
Inta aad aan ka arki kartaa ama comments, sida videos iyo liiska la xiriira feature videos waxaa si weyn u soo gaabisay, ka-off ganacsiga ku xiran tahay sida ugu dhakhsaha badan aad rabto in aad si aad u daawato aad videos awood!
Iyada oo ay tani u baahan tahay xoogaa footering agagaarka in amarka qaybta dhakhso of your computer, waa arrin ammaan ah in aadan la siiyaa aad raacdo tilmaamaha hoos ku qoran. Tani waxay wax yar tweak kor u furmay kala duwan oo fiican ee cinwaanada IP karin, in aragtida dadka isticmaala inta badan, loo hagaajiyo awoodda network marka naqdida.
Si tan loo sameeyo, si fudud raac tallaabooyinka hoose.
1. Riix Start, iyo nooca 'Lauch' galay aad Search Bar. Sida barnaamij degdeg ah Command muujinaysaa ilaa, xaq-riix waxa ku dooro 'Orod sida Maamulaha'
2. Haddii si degdeg ah UAC ah u muuqataa, ka dibna riix Haa
3. Nuqul amarka galay line cad marka amarka dhakhso ugu rarataan culaysyo - advfirewall netsh dari brannmur magaca xukunka = "YoutubeBufferTrick" dir = in tallaabo = block remoteip = 173.194.55.0 / 24,206.111.0.0 / 16 awood = haa (Fiiro gaar ah: Waxaad u baahan karaan si click xaq iyo Jinka xulo halkii Ctrl + V)
4. Hit gala
Tani furi doonaa wax badan oo fursado cusub naqdida idiin, laakiin wuxuu keeni karaa arrimo muhiim ah oo la websites kale. Haddii aad waligaa ku shubmaan kasta oo arrimaha ku saabsan goobaha aad isticmaasho in ay hadda hor istaagay, si fudud u raac tilmaamaha sida kor ku xusan laakiin isticmaali amarka halkii;
1. advfirewall netsh tirtirto brannmur magaca xukunka = "YoutubeBufferTrick"
Saddexdan tricks fudud noqon doonaa badan intii ku filnayd in ay kaa caawiyaan in aad hesho xiriir ka badan cad, oo deggan YouTube. Taas macnaheedu waxa weeye ma dheeraad ah oo ku taag ee weli ka pixelated ee clips aad jeceshahay inta ay sugayaan waxa ay ku shuban. Haddii aad ka heli Macluumaadkan caawimaad, fadlan la saaxiibadaa sida aan shaki ku jirin in ay aad u oggolaan doono dhibaatooyinka YouTube wadaagaan!
Qeybta 3: Sidee ay u xaliyaan dhibaatada ee No Sound on YouTube
Haddii aad tahay qof si joogto ah ee YouTube, ka dibna waxaad ogaan doontaa sida niyad waxay noqon kartaa waqtiyada. Cayayaanka Little oo qaladaad waa arrin caadi ah internet-ka ee video maktabadda ugu weyn. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee aan aragno dad ka hadlaynaana waa la'aanta ah ee codka on YouTube, inkastoo mugga lagu gagadin.
Tani waxay noqon kartaa weyn niyad gaar ahaan haddii aadan waqti u maxkamad iyo qalad talooyin si aad u hesho in ay mar kale shaqeeyaan. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, YouTube si fudud dib u caafimaad buuxa iyo si ka shaqeeya maamusho; waxaad si fudud u baahan tahay in la isku dayo xal ah oo kala duwan yar.
Xalka 1: Dheellitir mugga iyo update software
Solution 2: Download videos inuu u ciyaaro ciyaaryahanka desktop aad
Dhibaatada ay leedahay arintan waa in dhawaaqa, ama la'aanta, waxaa sababi kara arrimo kala duwan oo dhowr ah.
Si aad u billowdo leh, in aad la tijaabin doonaa;
· qabsashada aad mugga afhayeenka?
· howleheedii biraawsarkaaga?
· qabsashada mugga on YouTube laftiisa
· Baarista codka software kale sida Windows Media Player ama Spotify?
Haddii ay sidaas tahay, oo aad leedahay dhawaaqa meelo kale, laakiin ma on YouTube, ka dibna waxa ay u badan tahay arin in si deg deg ah lagu xalin karo. Haddii aad leedahay cod jirin meel kasta, waxay noqon kartaa wax ka silig dabacsan oo ku hadla Afuufi Suurka, laakiin aynu diirada dhaawac YouTube.
Haddii aad dareentid in kaliya YouTube aan la soo saaro dhawaaq, ka dibna isku day in aad soo socda;
· U ogolow Flash in ay isticmaalaan content dhinac saddexaad - waxaad ku samayn kartaa xaq-gujinaya video ah oo socday in 'Settings "
· Hubi Brannmur iyo Anti-Virus software si aad u aragto haddii ay xanibeen Flash ama cid saddexaad Flash content
Xalka 2: Download videos inuu u ciyaaro ciyaaryahanka desktop aad
Haddii aad xanuunsan tahay ee isku dayaya in ay daawadaan online videos in si fudud ma ciyaari dhawaaqa ama ma sameeyaan ugu tayada in aad ka fili lahayd, ka dibna kaliya iyaga download in aad desktop. Marka bixi mishiinka dhabta ah, mar dambe ma ay ku tiirsan yihiin isla dhinacyo in uu ordo faylka sida oo sameeyey on YouTube, si fursad in arrimaha dhawaaq aad la hagaajin doona fiican oo si deg deg ah!
Aan aragno sida aad ka soo dejisan kartaa YouTube videos si fudud.
Barnaamijka aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo YouTube-Wondershare AllMyTube
1. Download YouTube videos iyo playlists si fudud oo dhakhso ah
2. laguu suurogeliyo in aad doorato xal loogu videos YouTube waxaad kala soo bixi
3. U beddelaan YouTube videos in 150+ qaabab si aad si xor ah ku kombuyuutarrada gacanta aad ka ciyaari kara
4. Taageerada degsado videos ka badan 100 goobood oo ay ka mid yihiin video Break, MTV, vimeo, Dailymotion, MySpace iyo wax ka badan.
Sida loo isticmaalo Wondershare AllMyTube soo bixi YouTube videos la mid click
Tallaabada downloader 1.Install this
Waxa aad u baahan tahay in marka hore la sameeyo waa in la rakibo barnaamijkan on your computer. Barnaamijkan wuxuu taageeraa Windows iyo Mac. Waxaa Orod dib markii la rakibey.
Tag YouTube si aad u hesho videos aad jeceshahay oo iyaga u ciyaaro. Waxaa jiri doona a Download button sabayn on xaq u top of video ah. Riix badhanka si ay u soo bixi video ah. Waxa kale oo aad si toos ah nuqul karaa URL video iyo riix URL paste badhanka si aad u hesho videos ugu soo galay safka dajinta. Barnaamijkan kala soo bixi kartaa ilaa 10 videos waqti isku mid ah.
Tallaabada 3. Play YouTube videos
Wixii ciyaaro videos on your computer, kaliya aad u baahan tahay in ay laba jibaaraan guji videos ee ku dhameysatay kaalinta maktabadda. Haddii aad isku dayaya inuu u ciyaaro videos ku kombuyuutarrada gacanta, waa in aad loogu badalo videos ugu horeysay. Riix Beddelaan on xaq ah video ah oo ay doortaan qaab. Riix Ok inuu ku soo bilowdo qaab beddelidda.
Qeybta 4: Sida loo tir-Ads on YouTube
Waa wax aad looga xumaado in ay had iyo jeer xayeysiis la soo dhisay dabamariyay halka helitaanka iyo hoorto videos on YouTube - video goobta ugu weyn ilaa iyo haatan. Si kastaba ha ahaatee, aad jeceshahay doonaa xal hoose si ay u caawiyaan takhaluso xayeysiis dhibsado on YouTube. Iyaga Hubi out.The runta ah waa in ay ka saareen xayeysiiska on YouTube ma aha wax adag tahay in la sameeyo. Waxaa jira laba siyaabood oo ku saabsan sida aad u samayn karaa. Farsamooyinka Kuwani waa sida soo socota:
Haddii aad tahay mid ka mid ah oo u furan tahay si ay u helaan YouTube ah dalalka ay u la xakameeyey, waa in aad la iyadana siyaabo in ay tubada ka hor helitaanka content kasta. Iyada oo siyaabo naga kama dambaysta ah in ay tubada Youtube hoos ku xusan, waxaad ka raadin iman nool.
Xalka 1: Iyada oo ah Simple Code Command
Solution 2: Iyadoo Browser plugins
Xalka 1: Iyada oo ah Command Simple Code
Dhawaan, YouTube la iman hab aad wax ku ool ah oo ku saabsan sida loo xannibi xayeysiiska. Hadda, aad baabiin karta xayeysiiska on YouTube gabi ahaanba ay cookie in la soo badbaadiyey loo siiyaa biraawsarkaaga beddelo. Markaas ka dib wax ka beddelid samaynaya, xayeysiiska bogga internet-ka ee YouTube, xayeysiis kuwa gundhig ah oo ku saabsan ciyaaryahanka, gudahood guddi saxda ah iyo xitaa xayeysiiska ka mid ah dhammaan natiijooyinka raadinta la xakameeyo lahaa. Si aan ku bilaabo la farsamadan, fadlan raac tallaabooyinkan:
· Tallaabo 1: Booqo YouTube.com.
· Talaabada 2: Wuxuu furaa Developer tacsiyeeyaan . Waxaa la samayn karaa iyada oo keliya mid ka mid jaraa'id si tuuryo keyboard ah. Kuwan oo dhan waa dhan gaar ah browser si aad u baahan tahay in la raaco tallaabooyinka ku saleysan browser aad u isticmaasho. Tusaale ahaan, jaraa'id Ctrl + Shift + J waqti isku mid ah u Google Chrome.
· Tallaabo 3: Ka dib markii in, waxaad u baahan tahay inaad paste code gudahood ah tacsiyeeyaan suuqa kala: document.cookie = "VISITOR_INFO1_LIVE = oKckVSqvaGw; Jidka = /;
domain = .youtube.com "; window.location.reload ();
· Tallaabo 4: saxaafadda gala oo muhiim ah. Hadda, bogga la reloaded doono laakiin waxa ay haatan u xor ka xayeysiis kasta waa wakhti this.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad mar kale si ay u arkaan xayeysiiska, ordo code hoose ee ku saabsan suuqa kala tacsiyeeyaan ah: document.cookie = "VISITOR_INFO1_LIVE =; Jidka = /;
Xalka 2: Iyadoo Browser plugins
Google Chrome, Firefox iyo Opera waa daalacashada internetka inta badan la isticmaalo. Kuwani 3 daalacashada waa kuwa la inta badan isticmaalaan hoggaamiyayaasha ugu isticmaala internet helitaanka YouTube. By isticmaalaya plugins browser, waxaa fududaan doonta in aad xannibi xayeysiis ah in aad sida caadiga ah la kulmi marka aad daawato video ah on YouTube.
AdBlock Plus waa kordhin ah loo isticmaalo Chrome in xayeysiis taas oo lagu kalsoonaan karo si ay u isticmaalaan sidii ay si wax ku ool xannibi karaan xayeysiiska for more xiiso leh YouTube-aragnimo la daawado ah ka xanibeen.
Wixii browser tan, waxaad isticmaali kartaa TubeStop taasoo si fudud u xannibi karaa xayeysiiska iyo pop-up xayeysiis ee YouTube. Sida plugin ugu horeeyay, taas oo ka mid ah ma laha goobaha baahsan.
Kordhiyo wax ku ool ah in qof kasta u isticmaali kartaa in xayeysiiska on YouTube xanibeen waa AdsFree YouTube ku. Waxa aanu lahayn goobaha baahsan oo aad ku rakiban kartaa, uninstall ama ay gab ka qaybta "Maamul Extensions" ee Opera.
Qeybta 5: Sida loo Cad Your YouTube Taariikhda
Iyadoo daawashada cajaladaha on YouTube, haddii aad saxiixay in aad xisaabta Google ama YouTube, diiwaankaaga goobidda iyo diiwaanka video daawaday la kaydin doonaa si toos ah iyo camira YouTube. Waa wax fudud, haddii aad rabto in aad mar kale ka heli qaar ka mid ah jirka videos. Waa maxay dheeraad ah, YouTube hadda waa ogyahay waxaad dalabato ama doorashada videos aad rabto si aad u daawato, oo halkan ku tusi doonaa liiska la xiriira videos in aad mar walba oo aad qortey in aad xisaabta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waqtiyo, marka aad rabto in aad tirtirto ama xisaabtaada cadeeyo taariikhda YouTube. Maqaalkani waxa uu ku tusi doono oo dhan 3 habab fudud oo aad u baahan tahay in la raaco si loo kala cadeeyo aad ee la soo dhaafay daawaday iyo taariikhda la baaray ka xisaabtaada YouTube.
Xalka 1: Clear YouTube daawado taariikhda
Solution 2: Clear YouTube taariikhda raadinta
xalka 3: Clear YouTube taariikhda biraawsarkaaga ee (Firefox)
Tallaabada 1. Saxeex in aad xisaabta YouTube. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad gasho in aad xisaabta YouTube oo aad marin ay homepage.
Tallaabada 2. qaybta Access History of xisaabtaada. Riix tab taariikhda laga heli karaa dhinaca bidix ee muraayada hoos ku ilowdey aad. Ma aad arki kartaa tab taariikhda halkan, maxaa yeelay, YouTube hayaa inta badan badalka ay badaleen qaabka. Sidaas, guji hoos u soo dhaadhacay button dhanka bidix geeska xad-dhaaf ah ugu sareeya, oo kaliya ee soo socota si ay u logo YouTube ah. Hadda, liiska taagan arbushin doonaa, dooro taariikh ka mid ah liiska oo guji.
Tallaabo taariikhda 3. Clear daawado. Hadda, si fudud guji badhanka "Clear oo dhan daawado taariikhda" meel at xarunta ah ee shaashadda. Window A arbushin doonaa weydiinaya su'aasha isla mar kaliya si loo xaqiijiyo. Just xaqiijiyo in aad rabto in aad tirtirto oo dhan taariikhda gaadhka iyo taariikhda watch aad la isla tirtirayaa.
Xalka 2: taariikhda raadinta Clear YouTube
Tallaabada 1. Saxeex in aad xisaabta, haddii aad horey u-qortey.
Tallaabada 2. Helitaanka Tababaraha video tab. Riix aad YouTube username dhow dahay dhankiisii ​​midig sare ee shaashadda oo guji menu ee loo yaqaan "Video Manager".
Tallaabada 3. taariikhda Clear raadinta. Marka aad tahay tababare Video, guji badhanka loo yaqaan "Raadi taariikh" on galeeysid gacanta bidix hoos ku qoran magacaaga screen iyo muraayada. Haddaba, haddii aad rabto in ay nadiifiso diiwaanka dhan raadinta, ka dibna si fudud guji badhanka "Clear oo dhan taariikhda raadinta". Iyo, haddii aad rabto in aad tirtirto oo kaliya dhowr ah, ka dibna dooro su'aalo shaqsi ahaan gujinaya sanduuqa yar oo ku xiga si ay video kasta horyaalka. Marka aad dhamaysid aad doorashada, guji "saar" dusheeda in laga takhaluso taariikhda raadinta.
Tallaabada 1. Helitaanka menu taariikhda aad Firefox browser. Waxaad ka heli doontaa "History" menu on bar menu dhinaca sare ee Firefox browser.
Tallaabada 2. Dul si ay u muujiyaan oo dhan bogga taariikhda. riixdid on the "History" menu ku tusi doonaa links dheeraad ah, guji xidhiidhinta ugu horeysay ee loo yaqaan "Show All History". Haddii kale, waxaad sidoo kale ku dhacay karaa toobiye ay keyword "Ctrl + Shift + H" oo aad ka arki doonaa bog cusub oo leh taariikhda oo dhan goobaha uu booqday.
Tallaabada 3. Delete taariikhda YouTube. In liiska id oo dhan goobaha kale ee idin ​​soo booqday, waxa kale oo aad dareemi doonto ka links of dhan YouTube videos idin ​​soo booqday. Waxaad dooran kartaa link aad rabto in aad tirtirto oo samayn ah xaq-riix ku yaal oo guji "Delete this page" in laga takhaluso waxaa ka mid ah. Qaabkan waxaad tirtiri kartaa link ka hartay oo dhan si gooni gooni ah.
Haddii aad dooneyso in aad tirtirto oo aad taariikhda dhirta oo dhan dhammaan goobaha, ay u helaan browser, guji isla menu "History". Liiska hoos-hoos A arbushin doonaa. Click Tani waqti linkiga "Guji Recent History" ama ku dhacay toobiye keyboard ah "Ctrl + wareejin + Del" badhamada si ay u helaan suuqa kala isku mid ah. Halkan, waxaad fursad u haysataa in ay doortaan kala duwan oo markii ay nadiifiso taariikhda Author ka saac ee la soo dhaafay, Maanta ama wax kasta. Samee aad dooratay iyo riix batoonka "Clear hadda" iyo dhammaan taariikhda dhirta aad waa laga tirtirayaa iyo tab taariikhda noqon doonaa madhan.
Qeybta 6: Sida loo Isticmaalo YouTube Doubler la Sameeyo Video Mashup
Mashups Video adkaadeen muddo dheer gaar ahaan marka ay fududahay dadka oo dhan in ay sameeyaan in la website la odhan jiray YouTube Doubler . Mashups waa kuwa lagu qoslo iyo hal abuur leh, kaas oo ku siin doonaa maayad in la abuuro qaar ka mid iskaa. Bal aan hubiyo qaar ka mid ah shuqulkii weynaa marka hore ka dibna la arko sida aad u abuuri karaan mashups keligaa.
1: Shan mashups weyn sameeyey YouTube Doubler
2: Sida loo abuuro mashups la YouTube Doubler
Marka hore bal aynu eeg qaar ka mid ah tusaalooyin badan oo mashups video.
# 1. Alex Jones Beats rida ah ee tartanka qaylinaya
Tani waa mid ka mid ah mashups xiisaha badnaa aad daawan kartaa YouTube doubler maanta. Waxaad arki doontaa wax caajisaan Jones waa kuwa ciidan radio aad loo jecel yahay. Waxa uu sidoo kale waa dagaalyahan ah xorriyadda World Order New. Mashup Tani waxay kasoo muuqday isaga la orgi gudahood tartan qaylo in mar ka dhacay moon buluug ah. Waxa uu kula tartamayay orgigii uu xadhko cod xoog leh oo uu ahaa awoodaan si ay u jabiyaan orgigii.
Daawo this video >>
# 2. Joe Vs Toby
Kuwani waa laba videos; mid ka mid qoreysa Joe halka mid kale uu u Toby. Joe loolan Toby by qabashada dagaal gitaarka si loo ogaado oo u dhexeeya laba ka mid ah waa fanaanada ugu fiican iyo guitarist ah. Videos iyaga ciyaaray la kabanka iyo waxay labada exaggeratedly heeso. Waxay sameeyaan dhaqaaqdo waalan sida ay u ciyaaraan ay gitaarka.
# 3. John Coltraine VS Big Dog
Labadan videos ciyaari 2 songs halyeeyga dhex dhigteen mid ka mid ah songs, kuwaas oo ahaa meel caan ka ah John Coltrane kaas oo cinwaankiisu yahay "Talaabooyinka Giant". Labadan videos kasoo muuqdo dhawaaqa qalaad oo cajiib ah in la sameeyo 2 aalado Japan. Mashup Tani hubaal wuxuu kuu samayn doonaa maalinta xiiso leh.
# 4. Waxaad tahay burcad ah Vs inaad aad u gaabis ah
Mashup Kuwani waxay ka kooban yihiin laba kartoon ah videos in caruurta sida xaqiiqada ah waa jeclaan doonaa. Waxaa laga yaabaa inaad ilmahaaga u daawado oo ka dhigi maalin caadi.
# 5. Little Xiddiga
Video waxaa lagu aaddiyaa video kale. Mid ka mid ah ayaa marka hore waxaa loo soo muuqan wiil yar oo ka dhigaysa iskula halka video kale kasoo muuqday nin Ghadafi kii sameeya ku dhaqaaqdo isla wiilka dhalinyarada ah. The kale video ka dhigaysa goobta lagu qoslo oo waxaad ka heli doontaa sababta marka aad daawato maanta mashup oo keliya.
Si aad u gaar ah YouTube mashups aad la YouTube Doubler, remixer YouTube ah, waxaad u baahan doontaa inaad raacdo tallaabooyinka hoose:
Raadi YouTube videos. Booqo laba videos on YouTube in aad rabto in aad loo isticmaalo samaynta aad mashup u gaar ah. Fur labada videos laba tabs in aad brower, si aad iyaga nuqul karaa in YouTube Doubler.
Copy URL video in YouTube Doubler ah . Waxa soo socda in aad u baahan tahay inaad samayso waa in la furo tab ah browser 3aad. Fiiri website-ka rasmiga ah ee YouTube Doubler . Waa in aad joojiso videos in si toos ah la ciyaari laga yaabaa in marka ugu rarataan culaysyo page. Dooro URL oo dhan laba videos. Copy oo iyaga si gooni gooni ah paste sanduuqa URL.
Ma goob waqtiga . Go'aanso waqtiga saxda ah marka videos waa bilaabi si loo abuuro saamayn weyn ee aad mashup. Ku qor wakhtiyada kuwaas waa in seconds beeraha.
Dhamee abuuro mashup ah. Click Double ilaa iyo mid kasta oo videos aad ku daray bilaabi doonaa inuu u ciyaaro laga bilaabo wakhtiga aad qotomisay.
> Resource > YouTube > Dhamaan Talooyin in aad u baahan tahay Dhibaatooyinka YouTube